मुटुमा समस्या देखिएपछि विश्कप खेलेका इभानले लिए विश्राम ! – Everest Dainik – News from Nepal
मुटुमा समस्या देखिएपछि विश्कप खेलेका इभानले लिए विश्राम !
काठमाडौं, भदौं । मुटुमा समस्या देखिएपछि इटालियन क्लब एसी मिलानका डिफेन्डर इभान स्ट्रिनिकले केही समयका लागि फुटबलबाट बिश्राम लिएका छन् । स्ट्रिनिक रुसमा भएको विश्वकप फुटबलमा फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाली टिममा थिए ।
उनी गएको जुलाईमा इटालियन क्लब एसी मिलानमा अनुबन्धित भएका हुन् । उनले इटालियन जाइन्ट मिलानबाट डेब्यु गर्न बाँकी नै छ । ३१ वर्ष स्ट्रिनिकको मुटुमा समस्या देखिएको र तत्कालका लागि आराम गर्नु पर्ने देखिएको क्लबले जनाएको छ ।
उनको मुटुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमित चेकअप गर्नु पर्ने भएकाले अस्थायी रुपमा फुटबलबाट बाहिर हुनु परेको क्लबले जनाएको छ । स्ट्रिनिकले सन् २०१५ मा नापोली आएका थिए । उनी सन् २०१७ को समरमा साम्पडोरिए गएका थिए । उनी त्यहाँबाट एसी मिलान आएका हुन् । उनले क्रोएसियाबाट ४९ खेल खेलेका छन् । -देशसञ्चारबाट
ट्याग्स: Cortia footballer, Footballer, Ivan Rakitić, इभान स्ट्रिनिक